प्याजले शारीरिक सम्पर्कमा कसरि पुर्याउछ सहयोग ? यस्तो छ रोचक तथ्य ! - News Bihani
प्याजले शारीरिक सम्पर्कमा कसरि पुर्याउछ सहयोग ? यस्तो छ रोचक तथ्य !
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भदौ ६, २०७६
एजेन्सी- प्याज भान्सामा नियमित तरकारी वा मसलाकोरुपमा प्रयोग हुने बस्तु हो। कतिपयलाई प्याज मन नपरेपनि अधिकाँशलाई यो मन पर्छ।
यसका धेरै अचुक फाइदा हरु छन् र यसको सेबन स्वादका लागी मात्र नभइ स्वास्थका लागी पनि सेबन गर्नुपर्छ। प्याज सामान्य देखिने बस्तु भएपनि यसका दर्जनौं फाइदा छन्। प्याजले रोगसँग लढ्ने क्षमता बढाउँछ भने अनुहार पनि सफा पार्छ। आँखाको दृष्टी बढाउने प्याजले विभिन्न रोगबाट पनि बचाउँछ। काँचो प्याजले रक्तचापलाई सन्तुलित राख्छ।
यसमा हुने मिथाइल सल्फाइड र एमीनो एसिडले कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्छ मुटुमा हुने रोग लाग्न दिँदैन। त्यस्तै प्याजमा पाइने एन्टी९ब्याक्टेरियल गुणले शरीरमा हुने कोलेस्ट्रोलको स्तर नियमितरुपमा कम राख्छ। प्याजमा हुने तत्वले पाँचन प्रणाली पनि सुधार गर्छ। प्याज गर्मी चिज हो। यसले चिसो हुनबाट बचाउँछ। चिसो लागेको समयमा वा रुघा खोकी लाग्दा प्याजको सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ।
यति मात्र होइन प्याजको अनौठो फाइदा यौ८८न शक्ति पनि वृद्धी गर्छ। सुन्दर शारीरिक जीवनका लागि प्याजको सेवन फाइदाजनक मानिन्छ। पुरुषले प्याजको सेवन गर्दा उनीहरुको शारीरिक सम्पर्क गर्ने शक्ति बढ्छ । त्यसैगरी गर्मी मौषममा प्याज सेवन गर्दा लू लाग्ने खतरा हुँदैन। प्याजको एक चम्चा रस पानीमा मिसाएर छातीमा मालिस गर्दा फाइदाजनक हुन्छ। मधुमेह हुने ब्यक्तिले नियमित खानामा प्याज सलादकोरुपमा खानु राम्रो हुन्छ।
प्याजमा सल्फर तत्व अधिक हुन्छ। यो पेटमा हुने कोलोन, स्तन वा फोक्सोको क्यानसरबाट बचाउन उपयोगी हुन्छ। यसले पिसावमा हुने संक्रमण समेत रोक्छ। भने प्याजको रस लगाउँदा कपाल झर्न रोकिन्छ भने कालो पनि हुन्छ। यसले कपाललाई फुल्नबाट रोकेर कालो पार्ने काम समेत गर्छ। प्याजको रस चिनीसँग मिलाएर शरवत बनाएर सेवन गरेमा पत्थरीको समस्या रहँदैन। प्याजको रस सहितको पानी विहानमा सेवन गर्दा पत्थरी निस्कन्छ।